Xasan Cali Kheyre oo khadka Telfoonka kula hadlay Ra'isul Wasaaraha Itooobiya * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa Dhiggiisa Dalka Itoobiya Hailemariam Desalem kula hadlay Khadka telfoonka, waxa ayna labada dhinac kawada hadleen arimo muhiim ah.
Sida aan Wararka ku helnay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya ayaa dhigiisa kala hadlay sidii xabsiyada Itoobiya looga sii deyn lahaa Maxaabiis badan oo Soomaaliyeed uu ku jiro Wariye Maxamed Muudey Boqorka Bartamaha oo dhoor sano ku xiran dalka Itoobiya.
Xasan Cali Kheyre iyo Hailemariam Desalem ayaa si qoto dheer uga wada hadlay ahmiyadda ay leedahay sidii ay xoriyadooda dib ugu heli lahaayeen maxaabiista Soomaaliyeed ee weli kujira xabsiyada dalkaasi Itoobiya.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya ayaa aqbalay codsiga uga yimid dhinaca Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya, isagoo muujiyay in Dowladda Itoobiya ay diyaar u tahay isgarab taaga Dowladda iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Maxaabiis kala duwan oo ku xiran xabsio kuyaala dalka Itoobia ayaa la filayaa in laga soo dejiyo magaalada Muqdisho, waxaana horey Muqdisho looga soo dejiyay in ka badan 100 qof oo ku xirnaa xabsiyada dalka Itoobiya.
Dowlada Soomaaliya ayaa rabta in maxaabiista ay kasoo deeneyso xabsiyada dalka Itoobiya ku dajiso xiisada ka dhalatay wareejintii dowlada Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya Sargaal sare oo katirsanaa Jabahada ONLF ee dagaalka kula jirta dowlada Itoobiya